-प्रेमबहादुर शाही मुगु जिल्ला जति भौगोलिक विकटा छ, त्यो भन्दा पनि सयौं गुणाले रारातालले प्रसिद्ध छ । त्यहि भएर राजा महेन्द्र बीरबिक्रम शाहले वि.स. २०२० मा आफ्नो शासनकालमा रारातालको भ्रमण गरेका थिए । ३.२ किलोमिटर चौडाई, १ सय ६७ मिटर गहिराई, अधिकतम ५ किलोमिटर लम्वाई र १०.८ किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको…
-प्रेमबहादुर शाही नेपालमा जुन सयममा राजतन्त्र थियो, त्यहि समयमा नेपालका राजाले गद्दी आरोहणका समयमा प्रयोग गर्ने पहिरन श्रीपेच हो । श्रीपेचमा ७ सय ५० वटा हिराका टुक्रा रहेका छन । श्रीपेचको टायरामा २ हजार ७ सय टुक्रा छन । श्रीपेचको पछिल्तिर झुन्डिने कल्की बर्ड अफ प्याराडाइज नामक चराको पुच्छर रहेको…
Friday, 26 October 2018 15:25
Where Do We Go from Here?Background:Global perception on economic investment in Nepal is not positive in terms of fundamentals of business-friendly environment. This is disappointing to proud people of Nepal. Enthusiastic private investors are not inspired by the situation despite repetitive political claims of social transformation and progress by…
-प्रेमबहादुर शाही आज हिन्दु धर्मावलम्वीहरुले महान चाड दसैँ मनाईरहेका छन । लोक कथाअनुसार त्रेत्रायुमा रामले आफ्नी श्रीमती सीतालाई रावणले हरण गरेपछि लंकामा लडाईँ गरी रावणलाई समाप्त गरी हरण भएकी श्रीमती फेरि आफूले ल्याउन सफल भएकाले अर्थात विजय प्राप्त गरेकाले अयोध्याबासीले यो विजयलाई उल्लासका साथ मनाए अनुसार दसैं मनाउन थालिएको…
-शान्ति बस्नेत नेपालमा विभिन्न जातजातिको बसोवास छ । अनेकता र विविधतामा एकताको सन्देश बोकी सबै बसोवास गरेका छन् । आ–आफ्ना जातजातिले आ–आफ्नै किसिमको चाडपर्व मनाउँछन् । उनीहरूको आ–आफ्नै भाषा छ । त्यसमध्य सबै नेपाली चेलिबेटीहरूले महान् पर्वका रूपमा मनाउने चाड हो, हरितालिका तीज । चेलिबेटीहरूको सुख, दुःख, बह बहकाउने यही…
-शान्ति बस्नेत हाम्रो देश नेपाल ४ जात ३६ वर्णको फूलबारी हो । यहाँ विभिन्न जातजातिका मानिसहरु बसोवास गर्छन । समाज सवै जातजातिको बसोवासले गर्दा सवैको सुमधुर सम्बन्ध, मेलमिलाप र सदभावपूर्ण छ । त्यसैले एक अर्काको कला संस्कृति, रीतिरिवाज, चालचलनमा सवैको सकरात्मक भावना रहेको छ । तर विडम्बना भन्नु नै पर्छ,…
-प्रेमबहादुर शाही कुनै पनि देशको सरकार र त्यस देशका नागरिक कानुनमा बाँधिएका हुन्छन । सरकार संचालक र नागरिकहरु दुवैले कानुनको पालना गरी सधै कानुनप्रति वफदार हुनु पर्छ । कानुन भन्दा माथि कोही छैन भने, कानुन भन्दा माथि कोही हुनु पनि हुदैन । कानुन, सरकार र नागरिक भनेका एउटै एउटै अंङ्ग…
-प्रेमबहादुर शाही सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ देखि लागु गरेको कर्णाली किसानको कृषि उत्पादन खरिद गर्ने सरकारी कार्यक्रम आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ को बजेमा गाभाएको छ । नेपाल खाद्य संस्थानबाट कर्णाली क्षेत्रका कृषि उत्पादन खरिद गरि काठमाडौसम्म ल्याई बेच्नको लागि भनेर सरकराले ढुवानीमा अनुदान दिर्दै आईरहेको थियो । जुन काम सरकारले ग¥यो…
-प्रेमबहादुर शाही कर्णाली बब्द आफैमा एक पीडदायीक शब्द हो । कर्णाली शब्दमै वेदना छ । कर्णाली शब्दमै हृदय स्पर्शी भाव छ । कर्णाली शब्द सुन्ने नागरिकलाई यती पीडा हुन्छ, भने कर्णालीको पीडा भोग्नेलाई कति पीडा होला ? मानव इतिहासदेखि एक्काईसौंं शताब्दीसम्म आईपुग्दा मासिनहरु चन्द्रमामा बस्ति बसाल्न लागिरहेका छन, तर कर्णालीका…
-भोला लामिछाने ,यूरोप नेपाली कांग्रेस सत्तामा हुदा एमालेले नाकाबन्दी नाकाबन्दी भन्दैमा बितायो । नेपाली जनतामा वहा राष्ट्रीयता भन्ने बनायो राष्ट्रीयताको सवालमा कांग्रेसले भारतसग घुडा टेक्दै उसैको पछी परेको भन्दै गाली गर्दैमा बितायो । चुनावी माहौल सम्म आईपुग्दा वहा एमाले भन्ने पनी बनायो । त्यो बाहेक केही नहुने रहेछ भन्ने कुरा…